ikhaya » iindaba » Bluefish444 Izisa i4K / HD / SD Inkxaso ye-HMS DiSA
Bluefish444 Izisa i4K / HD / SD Inkxaso ye-HMS DiSA
I-multiple-channel 4K, HD kunye nokudlala kwe SD
North Melbourne, Australia, Septemba 13, 2017 - Bluefish444, Umenzi we-high-quality non-compressed 4K SDI, ASI, iVidiyo ngaphaya kwe-IP & HDMI Amakhadi e-I / O, kunye nabaguquleli bamancinane, kwi-video yezobugcisa, ivakalisa ukuhambelana Ye-HMS ' isisombululo sokusasaza kwi-Windows platform.
I-DiMS ye-HMS iyisisombululo se-channel-in-box-box-boxes, esinikeza ukujikeleza kwemisebenzi yedijithali ekwenzeni ngcono iinkqubo zokudlala kunye nezokudlala.
Ngendlela yokukhetha iifayile eziphambili, i-news feed, i-teletext kunye ne-subtitling, i-EPG, i-WSS kwaye EAS ukufakwa, kunye NA® protocol ukusebenza, i-DiSA izalisekisa iimfuno zokusasazwa kobuchwephesha njengesisombululo esinqabileyo sokuhlangabeza nayiphi na imfuno yokusebenza okanye ibhajethi.
Bluefish444 kunye ne-HMS baye basebenzisana ukufaka inkxaso ye-DiSA yonke Uluhlu lweevidiyo ze-I / O amakhadi, ukubonelela ngezinga eliphezulu le-UHD, i-3G okanye i-1.5G ukusasazwa kwe-SDI okanye ukuhamba kwemisebenzi yokudlala. I-software ye-software ye-DiSA idibanisa neekhadi ze-Epoch I / O ukuze zisebenzise ngokuxhaswa ngamakhadi amaninzi, gcwalisa & ukhiye, kunye ne-LTC I / O amandla abasebenzisi bayo. I-DiSA kunye ne-Epoch I / O inikela abasasazo uxolo lwengqondo ngolawulo olumgangatho, oluthembekileyo nolungaguquguqukiyo lwengxelo kunye nemveliso, kunye neeseva ezininzi zokudlala i-Epoch ezilawulwa zivela kwindawo enye.
"Uqwalaselwe kakuhle ngaphakathi kwishishini, i-HMS iye yahlala kwi-rafar ye-Bluefish444 ngexesha elithile kwaye siyavuya ukuvakalisa lo mbambiswano", utshilo uJonathan Fall, uMlawuli we-OEM we-Bluefish444 Yurophu. "I-HMS iye yavelisa imveliso eguquguqukayo ngokwaneleyo ukulungiselela abapapasho beTV kwii-TV zamashishini, kwaye abasebenzisi baya kuba nako ukuxhamla ngokugcwele udidi lweepoki zee-I / O kunye neempawu ezenziwe yi-HMS."
"I-Bluefish444 inikeza iimveliso ezigqwesileyo ezifezekisayo iimfuno zethu ukwenzela ukudala nokulawula uluhlu olubanzi lweenkonzo ezintsha," kusho uFrank Mistol, i-CEO eHMS. "Ngeenkcukacha ezibanzi kunye nokuthembeka okungaqhelekanga kweebhodi zabo ze-SDI, kunye nenkxaso epheleleyo kunye nezakhiwo ze-agile ngaphakathi kwenkampani, siye safumana enye intsebenziswano ebalulekileyo yeHMS."
Ividiyo ye-Bluefish444 ye-Epoch I-O ye-O / O yamanqanaba ekhadi, ehambelana ne-HMS DiSA, ifumaneka kuyo I-Bluefish444 yabasemagunyeni abagunyazisiweyo nabathengisi emhlabeni jikelele. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokuhlanganiswa kwe-Bluefish444 kunye ne-DiSA, nceda u tyelele Bluefish444.com
I-HMS inikeza isisombululo sesistim seendaba kunye nezimpendulo ezichanekileyo kwiingxaki ezicwangcisiweyo kunye neendlela ezintsha zoshishino zeenkampani ezahlukeneyo kunye nakwiimarike ezininzi ezahlukeneyo. Ngaphezulu kweminyaka eyi-20 yamava kwakunye nenani elikhulu leeprojekthi zelizwe kunye namazwe ngamazwe namhlanje eyaziwa ngokuba ngumqhubi wezinto eziphilayo ezihlangeneyo. I-HMS inikezela abathengi bayo ngesiphumo siphumelela ukuyeka-inkonzo kunye nenkxaso enzulu ekwenzeni izigqibo ezibalulekileyo zezoshishino ezinxulumene neteknoloji. Ngokunxibelelana ngokuthe ngqo kunye noomntu siqu, amaqela afanelekileyo kunye namaqhinga olwazi oluthandayo, kwaye ukusebenzisana kuwo onke amanqanaba omxhasi i-HMS uyakwazi ukufikelela kumgangatho ophezulu ongaqhelekanga wokukhanya, ukuguquguquka, ukusabalalisa nokusebenza kakuhle. Ulwazi olungakumbi lunokufumaneka kwi www.hms-dev.com
Eyasungulwa kwi-1998, iBluefish444 icandelo kunye negama le-brand Bluefish Technologies Pty Ltd., esekelwe eMntla Melbourne, e-Australia. Iimveliso zayo zithunyelwa nge-channel enkulu yokuthengisa ye-OEMs, abathengisi, kunye nabahlanganisi behlabathi jikelele. Ukufumana ulwazi olungakumbi, tyelela Www.bluefish444.com
Zonke iimpawu zokuthengisa ezisetyenziswe apha, nokuba ziqatshelwa okanye zingekho, ziyimpawu zeenkampani zabo. I-NDI uphawu lokuthengisa olubhalisiweyo NewTek, Inc.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli ukudityaniswa I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw SoftAtHome, MStar, iCES2017 Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-09-13
Previous: Ukuphila kunye neTeknoloji: Ukuphonononga i-Photorealistic Robotics
next: UMLWENZI / UMhleli
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Bluefish444 Ivakalisa i4K / HD / SD Inkxaso ye-HMS DiSA". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/bluefish444-iyakhupha-4khdsd-support-for-hms-disa/. Enkosi.